HYALKLASS Mee 4x5ml - Agba ọkụ • Musatalent
HYALKLASS Mee 4x5ml - Agba agba
€ 75,00 (VAT gụnyere)
S CL CA AKW PKWỌ AKW PKWỌ - Ejiri agba dị: ìhè, ọkara, ọchịchịrị na ọchịchịrị miri emi
Ọ bụ ọhụrụ linear hyaluronic acid enriched na organic Micro-pigments.
HYALKLASS MAP UP bụ dermocosmetic n'ụdị nke gel dị ọcha nke dabere na ịdị arọ molekụl dị arọ hyaluronic acid na ihe ọkụkụ (ihe ndị na-emepụta ihe ọkụkụ) nke na-egosipụta agba ya dị iche iche.
Emere HYALKLASS MA maka akpụkpọ hydration na ịcha ọcha. A na-atụ aro ya maka ụdị anụ ahụ gbara ọchịchịrị na nke gbara ọchịchịrị yana maka mbenata ọdịdị nke ntụpọ ahụ na akpụkpọ anya nke ihe otutu na ịka nká na-akpata (afọ tụrụ).
4 ampoulu nke 5ml
HYALKLASS Mee 4x5ml - Agba agba agba
Category: Microneedling na BBglow
Buru onye mbu nyochaa "HYALKLASS EME 4x5ml - Agba agba" Kwụsị azaghachi
Nyocha gị * Nyochaa ...zuru okèmmaezuruỌ bụghị ihe ọjọọogbenye
Smart 3 BED FOR BEAUTICIANS, PHYSIOTHERAPY NA MASSAGES - AKWAMKWỌ
Okpokoro ịhịa aka n'ahụ nke osisi na mpaghara 3 maka ndị na-achọ mma, masseurs na physiotherapists. Ihe nlereanya a kachasị ere ma anyị na-enye ya Smart akụkụ, gburugburu / mesikwuru nkuku na ...
€ 129,90 (VAT gụnyere) Aggiungi al carrello
HYALKLASS Mee 4x5ml - Agba ọchịchịrị
HYALKLASS MAP UP bụ ihe dermocosmetic n'ụdị gel ...
€ 75,00 (VAT gụnyere) Aggiungi al carrello
K-COVER gbara ọchịchịrị gbara 1x5ml
K-Cover bụ nke mbụ hyaluronic acid agwakọtara na ultra-ọcha pigments na penetrates elu-dermis mee na hydrate ọchịchịrị okirikiri.
K-Cover bụ dermocosmetic e mere maka hydration na ...
€ 20,00 (VAT gụnyere) Aggiungi al carrello
HYALKLASS Mee 4x5ml - agba Ọkara